I-Erotophobia okanye uloyiko lokwabelana ngesondo neqabane | Bezzia
I-Erotophobia okanye ukwesaba ukulala ngesondo kunye neqabane
UMaria Jose Roldan | 11/01/2022 22:24 | Isini
Nangona isenokubonakala ingaqhelekanga kwaye ingaqhelekanga, kukho abantu abanokuphuhlisa uloyiko lokulala neqabane labo. Olu hlobo lwe-phobia luyaziwa ngegama le-erotophobia kwaye ngokuqhelekileyo lwenzeka ukusuka ngaphantsi ukuya ngaphezulu. Umntu ophethwe yi-phobia enjalo uqala ngokungaqiniseki okuthile xa kuziwa ekuziphatheni ngesondo kunye neqabane kunye nokuhamba kwexesha ukwesaba ukulala ngesondo kuba kukhulu kwaye kubonakala.
Kwinqaku elilandelayo siza kuthetha nawe ngokubanzi malunga ne-phobia yesondo kunye indlela esichaphazela kakubi ngayo isibini.
1 I-Erotophobia okanye uloyiko lwesini
2 Yintoni omele uyenze ukuba une-phobia enjalo
I-Erotophobia okanye uloyiko lwesini
Olu hlobo lwe-phobia okanye uloyiko lunento yokwenza ngakumbi kunye nomzuzu osondeleyo obandakanyekayo ekulaleni ngesondo kunye neqabane, kunokuba nenyaniso yesondo ngokwayo. Umntu oneerotophobia unokuphulula amaphambili ngaphandle kwengxaki, ingxaki ebakho xa eneentlobano zesini neqabane lakhe. Kukho uluhlu lweempawu ezinokubonisa ukuba umntu une-phobia enjalo, njengokuziva ungakhululekile xa ulala ngesondo kunye neqabane okanye ukwenza izizathu zokuphepha umzuzu onjalo. I-phobia inokubaluleka kangangokuba umntu unokukhetha ukungabi neqabane.
Yintoni omele uyenze ukuba une-phobia enjalo
Umntu ophethwe lolu hlobo lwe-phobia kufuneka azi ngamaxesha onke, ukuba olo loyiko lunokoyiswa. Ayisiyonto ilula okanye ilula ukuyifezekisa kodwa ngomnqweno kunye nomonde ungakonwabela ukwabelana ngesondo neqabane lakho kwakhona. Nazi ezinye izikhokelo ezinokukunceda woyise olu loyiko:
Kukho abantu abaninzi abanengxaki yolu hlobo lwe-phobia, Ngenxa yokuba izinto endandizilindele ngesini zazingahambisani nenyaniso. Ukuze ugweme oku, kulungile ukufumanisa malunga nawo onke amathandabuzo anokubakho kwaye kuyimfuneko ukuya kwingcali efana ne-sexologist.
Iintlungu ezithile ezinxulumene nesondo zinokuba sesinye sezona zizathu zixhaphakileyo ze-erotophobia. Kule meko kubalulekile ukufumana ezandleni zengcali efanelekileyo yokunceda ukuxazulula ingxaki enjalo. Kwimeko yokwenzakala, Unyango lokuziphatha kwengqondo lufanelekile ukubeka iingxaki ezinjalo emva kwakho kwaye ujabulele isondo kunye neqabane lakho.
Ukwabelana ngesondo kunye neqabane lakho kufuneka kube lixesha lokunandipha ngokupheleleyo kwaye ngaphandle koloyiko. Kubalulekile ukwazi indlela yokuzola kwaye uphumle phambi kokuba neentlobano zesini ezinjalo. Ukwabelana ngesondo ngeTantric kunokunceda ukuphelisa uloyiko kwaye ukonwabele umzuzu ngamnye wesi sibini.
Ngamafutshane, umba we-phobia yesondo yingxaki echaphazela inxalenye ebalulekileyo yoluntu. Ukungaqiniseki okuthile okanye ukuxhwaleka kwexesha elidlulileyo kudla ngokubangela uloyiko olunjalo xa kufikwa ekulaleni ngesondo neqabane. Ukwabelana ngesondo kunye neqabane akufanele kubonwe njengento embi kwaye ukuba yinto emnandi okanye eyanelisayo. Ukuba ityala likhula, kuhlale kucetyiswa ukuba uye kwingcali efanelekileyo ukuze uncede ukuxazulula uloyiko olunjalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Isini » I-Erotophobia okanye ukwesaba ukulala ngesondo kunye neqabane
Pregorexia, uloyiko lokufumana ubunzima ngexesha lokukhulelwa
Fumana iqhinga lokuguqula nasiphi na isitya sibe sisitshisi samafutha